व्युटिसियनको लागि कस्ता म्यानपावर कम्पनीबाट कुन देश जान उपयुक्त होला ?
Fri, Aug 07, 2020 | 01:06:32 NST
आङकिला मगर, मोरङ
प्रश्न : मैले व्युटिसियन विषयमा डिप्लोमा पास गरेकी छु । म वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छु । मैले कस्ता म्यानपावर कम्पनीबाट कुन देश जान उपयुक्त होला ?
उत्तर : बलबहादुर तामाङ, पुर्व अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगर व्यवसायी संघ - अहिले ब्युटिसिनहरु विभिन्नि खाडि देशहरुमा जान पाउनु हुन्छ . त्यस बाहेक मलेसीयामा पनि आजकाल माग आउन थालेको छ । ब्युटिसियनको हिसावले जाँदाखेरी साउदि अरव बाहेक युएई, बहराईन, कतार, कुवेत खाडि मुलुकमा जान सक्नुहुन्छ । र कुन मेनपावरमाबाट जाने भन्नु भएको छ त्यो चाहिँ बैदेशिक रोजगार विभागको वेइवसाइट http://www.dofe.gov.np/new/pages/details/25# मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।